पानी पिउन नपाएर तडपिनु पर्ने नेपाल कस्तो जलस्रोतमा धनि देश ?
Home banner पानी पिउन नपाएर तडपिनु पर्ने नेपाल कस्तो जलस्रोतमा धनि देश ?
डोटी – सुन्दा तपाईहरुकालाई अच्चम लाग्न सक्छ ! पानी पैचो चल्ने बस्ती छ भन्दा । हो डोटी जिल्लाको दिपायल–सिलगढी नगरपालिका भित्र एउटा यस्तो बस्ती छ जहाँ पानी पैंचो चल्छ । सिचाँईका लागि होईन दैनिक जीवन निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शुद्धपानी होईन जीवन निर्वाह गर्न अशुद्ध पानी समेत पाइरहेका छैनन् । जसकाकारण मानब बस्ती नै सार्नुपर्ने समस्या देखिएको छ ।
मुलुकभरी खानेपानीको हाहाकार भइरहेको समाचारहरु संम्प्रेषण भइरहेका बेला डोटीमा एउटा यस्तो बस्ती जहाँ खानेपानी अ‍ैचोपैचो चल्छ । डोटीको सबैभन्दा पुरानो दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा पर्ने बाफिमा करिब सय घर परिवार रहेको मानब बस्तीमा खानेपानी नहुँदा बस्ती नै विस्तापित हुने सम्भावना बढेको हो ।
खानेपानीको समस्या देखा परेपछि ५ वर्ष पहिले एउटा गैरसरकारी संस्थाले आकाशे पानी सञ्चित गर्ने टंकि निर्माण गरीदियो तर आकाशे वर्षा अनियमित हुन थालेपछि वर्षौदेखि संचय गरी राखेको पानीलाई विना शुद्धीकरण खान स्थानीय बाध्य रहेका छन् । घरमा पानी सकिए उनीहरुले छिमेकि सँग पानी अ‍ैचोपैंचो गर्नु पर्ने नियति नै बनेको छ । चुनावका समयमा नेताहरु खानेपानीको व्यवस्था गर्ने भन्छन् तर कोहि कसैले खानेपानीको व्यवस्था गरिदिएको छैन ।
स्थानीय सरकार गठन भएको पनि वर्ष दिन विति सक्यो । एक वर्ष सम्म स्थानीय सरकार खानेपानीको मुहान खोजीरहेको जिकीर गर्छ । वर्षौ–बर्ष देखि खानेपानीको समस्या खेप्दै आएका जनताहरु प्रति स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपथ्र्यो तर ध्यान गएको देखिदैन ।
संविधानतः खानेपानी, सरसफाई, स्वास्थ्य जनताको मौलिक अधिकार हो । खानेपानी नपाई काकाकुल भएका बाफि बासी जनताको समस्या कसले कहिले समाधान गरी दिने हो स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
Previous articleतरकारी खेतीले फेरिएको जीवन, १७ जनाको परिवार चलाएर वार्षिक १४ लाख बचत
Next articleउद्यमीलाई सत्ताइस लाखको उपकरण